FITATERANA : Tsy mbola ara-dalàna ny hiasan’ny “Taxi-moto” eto Antananarivo
Tsy manaiky ny hiasan’ireo “taksi-moto” eto an-drenivohitra ny mpamily fiarakaretsaka. 1er avril 2021
Tandindomin-doza ny asan’ny mpitatitra fiarakaretsaka, hoy ireo mpikambana avy ao amin’ny CSST na ny Komity statejika miandraikitra ny taksy noho ny fisian’ireo “taksi-moto” izay sady tsy ara-dalàna no manome endrika ratsy ny fitaterana an-drenivohitra. Midrnikina hiditra anaty sehatra ara-dalàna anefa ny “taksi-moto” etsy an-kilan’izay ary mitady ny lalana rehetra hidirana amin’izany.
Nanamafy ny CSST fa tsy eken’izy ireo hatramin’ny farany ny hiasan’ireo “taksi-moto” malalaka eto andrenivohitra. Hampiakatra ny raharaha amin’ny ambaratongam-pahefana mahatapa-kevitra izy ireo, raha ny voalaza hatrany ary mangataka ny hanamafisana ny sazy ho an’ireo izay mbola minia manao izany. Antony maro no voalaza fa tsy voahajan’ireto taksi-moto ireto ka anaovan’ny CSST antso avo. Ao anatin’izany ny tsy fananana fahazoan-dalana hitrandraka izany asa fitaterana izany. Eo koa tsy fandoavana hetra ary ny tsy fanajana ny fandaminana mahakasika ny fifamoivoizana eto an-drenivohitra. Ankoatra ireo voalaza ireo, mety hampidi-doza ireo mpandeha ihany koa ny “taksi-moto” satria tsy voara-mason’ny fanjakana sy ny kaominina Antananarivo renivohitra ny fisian’ireo. Tsy fantatry ny kaominina sy ny Fanjakana mazava mantsy hatramin’izao izay tena isan’ireo “taksi-moto” Tsy fantatra ihany koa ny tena mpitarika azy manoloana ny lalàna.
Mpitatitra iray izay nitonona ho mpikambana ao amin’ny birao “taksi-moto” etsy Cenam no nilaza taminay fa efa tafakatra 2 500 amin’izao fotoana ny “taksi-moto” eto Antananarivo ary ahiana hananika ny 3 000 izany atsy ho atsy noho ny fahaverezan’asa nateraky ny covid-19.
Mora ampiasain’ny mpanao ratsy
Zary lasa fenitry ny fitaterana eto an-drenivohitra ny hoe : izay manana moto dia mahazo mitatitra olona na tsy manana fahazoan-dalàna amin’izany aza. Miteraka tsy fandriam-pahalemana ary manome vahana ny halatra sy ny sinto-mahery koa ny fisian’ny “taksi-moto” noho izay tsy fananana taratasy ara-dalàna izay. Fitaovana mora ampiasain’ny mpanao ratsy izy ireny ary matetika aharaisana fitarainana hatrany. Efa nisy mihitsy aza, raha tsiahivina ny mpanao “kidnapping” sy jiolahy nilaza ho mpanao “taksi-moto”, araka ny tatitra avy amin’ny mpitandro ny filaminana ny 11 jolay 2020 lasa teo, teny 67ha sy ny manodidina.
Noho ireo antony maro ireo, nanentana ireo zatra mitaingina “taxi-moto” mba tsy hanjifa izany intsony ny tompon’andraikitra eo anivon’ny Kaominina Antananarivo renivohitra. “Hampidi-doza azy ireo ny fandehanana amin’itony fitaovam-pitaterana tsy ara-dalàna itony, tsy misy ny fandriampahalemana ary tsy voaaro ihany koa ny ain’ izy ireo . Entanina hatrany ihany koa ireo mpandeha mba hanjifa ny sehatra ara-dalàna”, hoy ny talen’ny kabinetra lefitra eo anivon’ny Kaominina Antananarivo renivohitra. “Hampiakarina ambony ny sazy ho an’ireo minia mandika lalàna. Tsy misy miraharaha ny sazy tsotra kanefa mitombo isan’andro ny isan’ireo tsy manara-dalàna”, hoy ny tompon’ andraikitra ao amin’ny CSST. Nanterin’ity farany fa mety hiafara amin’ny fanasaziana ireo mpandeha tratra mitaigina “taksi-moto” ity raharaha ity raha miziriziry ny roa tonta.
An-kilan’izay, nilaza ireo mpitatitra mivondrona ao amin’ny “taksi-moto” tsy ara-dalàna, eto Antananarivo fa antony iray nampirongatra ireo taksi-moto ny fahaverezan’asa noho ny covid-19. Misy amin’ireo miantsehatra manao “taksi-moto” no voaroaka tany am-piasana, ka voatery niditra tamin’ity asa ity hamelomany ny vady aman-janany. Tsy vahaolana anefa izany, raha ny nambaran’ny avy ao amin’ny kaominina hatrany. “Maro be ny asa ara-dalàna eo amin’ny sehatry ny fitaterana, tsy azo leferina ny tsy fanarahan-dalàna satria mitarika makany amin’ny gaboraraka izany ary manome vahana ny halatra sy sinto-mahery”, araka ny nambaran’ny Tale misahana ny fitaterana sy ny fifamezivezena an-dRenivohitra eo anivon’ny kaominina.
Misy ny sazy
Tataovana “fihibohana” mandritra ny 10 andro ireo “taksi-moto” tratra manomboka izao ary mety hiitatra 20 andro izany, arakaraka ny fahadisoana natao. Eny amin’ny faritra 67Ha, Ampefiloha, Ankadimbahoaka, Andrefan’ Ambohijanahary, Ampasampito, Anjanahary, izany hoe ireo faritra mampitohy amin’Atsimondrano sy Avaradrano no tena betsaka “taksi-moto” miasa amin’ izao. Ahitana izany koa ireo toerana ahitana fitohanana lavareny tahaka ny eny Anosizato, Analakely, Ambohijatovo, Itaosy sy ny manodidina.
Antony faharoa mahatonga ny mpanjifa tsy maintsy mampiasa “taksi-moto” koa anefa ny haratsian’ny kalitaon’ny fiara fitaterana ampiasain’ny mpitatitra fiarakaretsaka ara-dalàna. Mila jerena akaiky ny mahakasika azy ireny satria maro be ny fiarakaretsaka efa hita fa midonaka, maty lava, simba, drodroka kanefa mbola mahazo fahazoan-dalana hiasa ihany. Nanontaniana mahakasika izay moa ny foibe fitsarana fiarakodia eto Antananarivo saingy tsy nanome valiny mazava. Nambaran’izy ireo fotsiny fa : “hain’ireo mpamily ny mamboatra sy manatsara ny fiarany na ara-teknika izany na arak’endrika rehefa hanao fitsirihana ara-teknika, saingy vao vita io fitsirihana io dia ravarava ho azy eny am-pandehanana eny ny fiara”. Misy koa anefa ireo mitady lalana ambanin’ny tany manao kolikoly tsotra izao na minia tsy manao fitsirihana ara-teknika. Tsy azo lavina fa mitarika tsy fanarahan-dalàna ny tsy fahazoan’ny mpanjifa fahafaham-po. Tokony hiezaka hisoroka ny tsy hisian’ny izany ny tsirairay mba ho tanteraka ilay hoe fitaterana, lavitry ny loza sy ny tsy fanarahan-dalàna.
Samy mahalala ny rehetra fa tsy ara-dalàna ireny fitaovam-pitaterana ireny kanefa maro be ny manjifa azy. Ny toe-tsaina mihitsy izany no mila ovaina ary samy mila manara-dalàna na ny an-daniny (mpanjifa) na ny an-kilany (taksi-moto) Mila mandray andraikitra ihany koa ny mpitandro ny filaminana mandrindra ny fifamoivoizana eny an-dalàna eny. Matetika mantsy, eo imason’ ny polisy sy zandary mihitsy ireo “taksi-moto” voalaza fa tsy manara-dalàna no miantso mpandeha kanefa jerem-potsiny sy itsikitsikiana aza. Misy firaisana tsikombakomba ve sa rehefa mahazo baiko hoe “operation taxi-moto” ihany vao afaka manasazy ireny ny mpitandro ny filaminana ?
Mametraka ahiahy sy fahamailoana tanteraka ireo olom-pirenena FANOMEZANA ZOM-PIRENENA HO AN’NY VAHINY (2711) 8 juin 2021 Hamaritra ny ho avin’ny mpanazatra vaovao ny lalao hatrehan’ny Barea manaraka FAMPIVONDRONANA (114) 8 juin 2021 Mponina an-jatony eny Antanandrano tandindomin-doza OLANA AMINA TANY MIREFY 30 HA (113) 8 juin 2021 ALAKAMISY 3 JONA - ALAROBIA 9 JONA 2021 (105) 8 juin 2021 Tena fanoitra amin’ny fampandrosoana saingy be sakantsakana SEHA-PIHARIANA VOLAMENA (104) 8 juin 2021